Tag Archive for "अष्ट्रेलिया" - विश्वकप क्रिकेट : बंगलादेशलाई हराउँदै अष्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा
कोपा अमेरिका क्वाटरफाइनल : कसले कोसँग र कहिले खेल्दैछ ? हेर्नुहोस् ! | कार अनियन्त्रित भई सुनकोशी नदीमा खस्दा २ को मृत्यु | विप्लव समूहका लमजुङ सेक्रेटरी पोखरामा पक्राउ | विप्लव समूहका युवा नेता नरबहादुर कार्की पक्राउ | तीन हप्तापछि तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा
विश्वकप क्रिकेट : बंगलादेशलाई हराउँदै अष्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा
एजेन्सी । अष्ट्रेलिया इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । बिहिबार भएको खेलमा बंगलादेशलाई ४८ रनले पराजित गर्दै अष्ट्रेलिया अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । इंग्ल्याण्डको नटिङघममा अष्ट्रेलियाले दिएको ३ सय ८२ रनको फराकिलो लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले पुरै ५० ओभर खेल्दै ८ विकेट गुमाएर ३३३ रन मात्र बनाउन सक्यो । बंगलादेशक... थप पढ्नुहोस्
विश्वकप क्रिकेटमा वार्नरको शतकमा अष्ट्रेलियाको फराकिलो लक्ष्य
एजेन्सी । इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलियाले बंगलादेशलाई जितका लागि ३ सय ८२ रनको फराकिलो लक्ष्य दिएको छ । इंग्ल्याण्डको नटिङघममा पहिले ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले ५० ओभर खेल्दै ५ विकेट गुमाएर ३ सय ८१ रन बनाएको छ ।अष्ट्रेलियाका लागि ओपनर डेभिड वार्नरले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै शतकीय इनिङ्स खेले । १ सय ४७ बलको सामना गरेका वार्नरले ५ छक्का र ... थप पढ्नुहोस्
विश्वकप क्रिकेट : अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । १२ औँ आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार दुई खेल हुँदैछन्। पहिलो खेल अष्ट्रेलिया र श्रीलंकाबीच खेल जारी छ , लण्डनमा हुनेछ भने दोस्रो खेल अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिकाबीच साँझ सवा ६ बजे कार्डिफमा हुनेछ। श्रीलंकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि अष्ट्रेलियाले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। जारी विश्वकपमा हालसम्म चार खेल खेलेको अष्ट्रेलिया तीनमा विजयी भएको छ भने एक खेल गुमाएक... थप पढ्नुहोस्
चार देशका लागि राजदूत सिफारिस, को कहाँ-कहाँ पुगे ? [नामसहित]
काठमाडौं । सरकारले अष्ट्रेलिया लगायत चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अष्ट्रेलिया सहित स्पेन,बंगलादेश र कतारका लागि राजदूत सिफारिस गरेको हो । बैठकले अष्ट्रेलिया का लागि महेशराज दाहाल, स्पेनका लागि आङफुटी शेर्पा, बंगलादेशका लागि बंशीधर मिश्र र कतारका लागि नारद भारद्वाजलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । सिफारिस भएका दाहाल, मिश्र र भारद्वाज नेकपा निकट मानिन्छन्... थप पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलियाको प्रसारक एबीसीको कार्यालयमा प्रहरीको छापा
एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा, पत्रकारहरूलाई लक्ष्यित गर्दै थालिएको खानतलास कार्वाहीको दोस्रो दिन प्रहरीले अष्ट्रेलियन ब्रोडकष्टिंग कर्पोरेशन, एबीसी,को सिड्नीस्थित मूख्यालयमा छापा मारेको छ। उक्त सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको कार्यालयमा दुईजना रिपोर्टर र समाचार निर्देशकको नाम उल्लेख भएको खानतलास अनुमति पत्र, सर्च वारेन्ट, सहित प्रहरी अधिकारीहरू पुगेका थिए। त्यस्तो प्रहरी कार्वाहीको एबीसीले विरोध गरेको छ। प... थप पढ्नुहोस्
एजेन्सी । अष्ट्रेलियामा शनिबार सम्पन्न निर्वाचनमा सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीलाई अनपेक्षित निर्वाचन परिणाम आउने देखिएको यहाँको राष्ट्रिय टेलिभिजनले जनाएको छ । एबीसी टेलिभिजनका अनुसार वर्तमान दलले पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थासमेत गुमाउनसक्ने देखिएको छ । आगामी सरकार प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनको गठबन्धनको पक्षमा जाने तर उक्त गठबन्धनलाई पनि बहुमत प्राप्त हुनेछ वा अल्पमतको सरकारको बनाउने अवस्... थप पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री बव हकको निधन
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री बव हकको बिहीबार ८९ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । देशको राजधानी सिड्नीस्थित आफ्नै निवासमा उनको निधन भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । लेबर पार्टीका नेता हकले सन् १९८३ देखि १९९१ सम्म अष्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा चिकित्सकीय सेवा र राजनीतिक रुपान्तरणको नमूना स्थापित गरिएको बताउने गरिन्छ । ... थप पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलियाद्वारा अध्यागमन नीतिमा यसरी भयो परिवर्तन
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन तथा भिषा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्ततित नियममा मुख्य गरेर स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र 'पीआर' लिनका लागि लागु गरिएको ‘पोइन्ट’ अंक सिस्टममा ठुलो फेरबदल गरिएको छ । लामो समयदेखि अष्ट्रेलियाले यहाँको स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र ‘पीआर’ पाउने प्रक्रियाका लागि अंक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । नयाँ नीति अष्ट्रेलियामा अदक्ष आवेदकलाई निरुत्साहित गर्ने र द... थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका विद्यार्थीका अभिभावक र विद्यार्थीले सरकारी समितिमा कुनै उजुरी नदिएकाले कन्सल्टेन्सीलाई के कारबाही गर्ने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको छ । अष्ट्रेलियास्थित एआइबिटी कलेजमा नर्सिङ विषय अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम सत्र पुरा हुनु अगावै अष्ट्रेलियन सरकारले सो कलेज बन्द गराएको कारण नेपाली बिद्यार्थी अलपत्र परेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले ल... थप पढ्नुहोस्
अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र : उद्धार गर्न माग गर्दै प्रदर्शन
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र पर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै त्रिचन्द इकाइ नेपाल विद्यार्थी संघले सोमबार काठमाडौमा प्रदर्शन गरेको छ । संघले काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडी प्रदर्शन गर्दै बिद्यार्थीहरुको उद्दार र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारवाहीको माग गरेका हुन् । विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनका कारण घन्टाघर क्षेत्रमा आधा घण्टा सवारी आ... थप पढ्नुहोस्